Qulqulluun Sinoodosii Ortodoksii Tawaahidoo koree Waajjira Lubummaa Oromiyaa balaaleeffate - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Paatiriyaarkin Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuuna Maatiyaas
Qulqulluun Sinoodosii hundeeffama Mana Lubummaa Oromiyaa akka balaaleffatuufi seeraan akka gaafatamu ajajuu isaa Paatiriyaarkin Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuuna Maatiyaas ibsa har'a kennanin himan.
Tibbana Koreen Luba Balaay Mokonniinin durfamuufi Caasaan Mana Lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa akka hundaa'u gaafaatu ijoo dubbii ta'eera.
Dubbii isaaniin Abuuna Maatiyaas, ''gareen gaaffii kana dhiheesse hojii isaa irraa akka of qusatu Sinodosiin ni akeekkachiisa,'' jedhaniiru.
'Ibsi Lubni Balaay kennuuf jedhan beekkamtii hin qabu'
Manni Kiristaanaa aadaa, bifa, afaaniifi saba osoo hin foo'in tajaajilti kan jedhan Abuuna Maatiyaas kitaabonni amantaa Afaan Oromoon akka qophaa'an ni eeru.
Gaaffiin ka'e ''biyyaafi Mana Kiristaanaa kan qoodudha,'' jechuun balaaleeffatan.
Dabalanis, gaaffiin ka'e ''Ummata kabajamaafi Mana Kiristaanaaf oolmaa oole, ummata Oromoo, akka qollifatteefi akka hin tajaajille akkasumas beekaa akka miite fakkeessuuf kan kaayyeffatedha,'' jechuun ibsaniiru.
Akka ibsa har'a kennametti, koreen Luba Balaay Mokonniinin durfamu yaada isaanii Qulqulluu Sinodositti qaamaan dhihaatani akka dhiheessanif akka gaafatamaniifi kunis akka ta'e Paatiriyaarkin himaniiru.
Waajjira Mana Lubummaa Oromiyaa hundeessuuf yaadame
Dabalataanis, kanaan dura yaada dhihaate irratti koreen akka qoratu isa jedhame akka waan bira darbametti kaasuun eeyyamaafi beekkamtii Qulqulluu Sinodosiin ala miidiyaatti ibsa kennaniiru jechuun dhiifatama akka jedhan gaafatamuu isaanii ibsa ibsi har'a kenname
Kanaanis, koreen Luba Balaayin hogganamu guyyaa kaleessaa ''dhiifama gaafachuuf miseensota koree kaan waliin mari'annee deebina'' jedhaniiru jedha ibsichi.
Ta'us, har'a Qaam'ee 2, bara 2011 ganamatti bellamni qabamus Lubi Balaay Mokonniin hin argamne jedhameera ibsa har'a kennamen. Garuu, miseensonni koree kanaa lama barfatanii gahuu dubbatu.
'Sinoodosiin guyyoota 30 keessatti deebii akka nuuf kennu gaafanna'
Kanumaanis, ejjennoo isaanii akka hin jijjiirre ibsuu isaanii eera ibsi har'a bahe.
Kanaanis, ''hordoftonni amantichaa tokkummaa amantii isaaniifi kan Mana Kiristaanaa akka eegan Qulqulluun Sinodosii waamicha dhihesseera,'' jedha.
Abuuna Maatiyaas itti dabaluun namoonni koree kanaa 'taayitaa bu'uura seeraa osoo hin qabaatin' asxaa, chaappaa akkasumas maqaa Mana Kiristaanichaa fayyadamuu isaaniin tarkaanfiin fudhatamuu qaba jedhaniiru.
''Qajeelchi tajaajila seeraa Waajjira keenyaa namoota seeraan alaa irratti himata banuun mirgaafi faayidaa Mana Kiristaanaa akka kabachiisu Qulqulluun Sinodosii ajaja dabarseera,'' jedhan Abuuna Maatiyaas.
MM Abiy hoggantoota Mana Kiristaanaa Ortodoksii waliin mari'atan
Guyyaa kaleessaa Miseensonni Qulqulluu Sinodosii Minstira Muummee Abiy waliin mari'achuu isaanii Waajjirri Ministira Muummee beeksiseera.
Koreen Luba Balaayin hogganamu gaaffii Manni Lubummaa Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo akka hundaa'e gaafate guyyoota 30 keessatti Qulqulluun Sinodosii akka deebisu gaafachuun isaa ni yaadatama.
Luba Balaay Makonnin: 'Sinoodosiin guyyoota 30 keessatti deebii akka nuuf kennu gaafanna'
1 Fuulbana 2019
Boombiin Mandiitti lubbuu galaafate, Baateetti jiraattota reebichaaf saaxile
Wal-dhibdee Gadaa Meelbaa fi adeemsa araaraa
Aanga'oonni Eertiraa waggoota 18'f hidhaa jiran eenyu?
Nama yeroo baay'ee isin sobu akkamiin adda baafattu?
Gareen Taalibaan Tiraamp waliin mari'achuu ni barbaanna jedhan